Ukuhlala kumbindi wesithili saseZurich 4 - I-Airbnb
Ukuhlala kumbindi wesithili saseZurich 4
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguGian
Ukuhlala entliziyweni yesithili saseZurich 4.
Ukuhamba nje imizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe esikhulu saseZurich kwaye kanye embindini wentshukumo, uhlala apha njengenxalenye yendlu ekwabelwana ngayo ngabantu abathathu. Iivenkile zokutyela ezahlukeneyo, imivalo, iiklabhu, iipaki nokunye okuninzi zikwindawo ekufutshane. Eyona nto ibalulekileyo: i-Kanonengassbar iphantsi komgangatho wesakhiwo. Igumbi limalunga ne-16 square metres, lifakwe ngokupheleleyo kwaye ligcwele ukukhanya imini yonke ngenxa yeefestile ze-2. Kwaye ngokuqinisekileyo ungasebenzisa igumbi lokuhlala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye ne-balcony.
Imizuzu eli-10 kuphela ngeenyawo ukusuka kwisikhululo esikhulu saseZurich uhlala phakathi kwesithili se-pulsating 4. Igumbi liyinxalenye ye-3-person flat share on the floor 3rd floor and your uncomplicated roommates are two working boys age 29 and 30.,
Igumbi ngokwalo linebhedi eyi-1.60mx 2.00m enkulu kwaye ikhululekile (umatrasi waseMyrbacka ovela kwi-IKEA). Ukwanayo netafile enkulu yeofisi kunye nesitulo seofisi kwaye unokugcina izinto zakho zobuqu kwiindawo zegumbi kunye neshelufu (ndishiya ezinye zezinto zam zobuqu kwigumbi, kungenxa yoko le nto ingekho yonke indawo yokugcina ekhoyo kuwe). Egumbini kunye nakwenye indawo yokuhlala une-WiFi ekhawulezayo. Ukusuka kwifestile yegumbi kunye negumbi lokuhlala unokubona ngokuthe ngqo kwipaki ye-barracks.
Kwigumbi lokuhlala kunye nekhitshi, ongayisebenzisa kwakhona, uya kufumana yonke into oyifunayo. I-TV ineTV yeTyuwa, iNetflix kunye ne-PS4 kunye neNintendo64 nazo zixhunyiwe. I-balcony (nceda utshaye kuphela apho), i-cloakroom kunye negumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi ziyakwabelwana.
Wamkelekile ukuba usebenzise ibhayisekile yam ye-elektroniki okanye ibhayisekile eqhelekileyo xa usenza uhambo okanye uyokuthenga.
I-HDTV ene-I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo, I-Apple TV
Uya kufumana yonke into oyifunayo kwindawo ekufutshane. Nokuba uya kuthenga, ukuya kwindawo yokutyela, i-pub crawl, imvakwemini ezolileyo epakini, ukuqubha echibini okanye e-Limmat, ubusuku bepati yasendle kwenye yeeklabhu ezininzi okanye unikezelo lwenkcubeko. Ungafikelela phantse yonke into ngeenyawo kwaye kungenjalo ibhayisekile yam isesandleni sakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Gian
Ngexesha lokuhlala kwakho ungandifumana ngoWhatsapp, umnxeba okanye i-imeyile. Abantu ohlala nabo banokukunceda ngemibuzo emininzi.